Trump sodogii iyo sodohdii oo dhalashada Maraykanka qaatay - Worldnews.com
Viktor iyo Amalija Knavs oo ah waalidka Melania oo ah xaaska Trump ayaa asal ahaan u dhashay Slovenia, dhaarta muwaadinnimada ayayna ku mareen New York Khamiistii, sida uu xaqiijiyay
"dadka awoodaha qayru caadiga ah leh"
Trump: ninka dilka loo haysto in uu dalka Maraykanka joogaba ma ahayn
Nin ayaa lagu soo oogay dacwad dil oo la xiriirta ardayad koleej dhiganaysay oo la dhoho Mollie Tibbetts, sida ay booliisku sheegeen. Eedaysanaha oo la dhoho Cristhian...
Xaaskii ugu horeysay ee Donald Trump uu guursaday ee Ivana, ayaa bilowday dagaal afka ah, ayadoo sheegtay in xaaska hadda ee Melania aysan ahayn marwada koobaad ee...
Marwada koobaad ee Maraykanka Melania Trump ayaa gashay qalliin uu Aqalka Cad ku tilmaamay mid kali la xiriira. Xafiiskeeda ayaa sheegay in qalliinkaas ay fuliyeen...
Marwada koobaad ee Maraykanka Melania Trump ayaa lagu dhaliilay jaakad ay u xiratay safar ay ku tagtay meel carruurta muhaajiriinta lagu hayo oo ku taalla Texas. Melania...
Dalxiisayaal Maraykan ah oo ku tuntay ugxaan shimbiro muhiim ah
Dad u dalxiis tagay xeebaha gobolka Alabama ee dalka Maraykanka ayaa la sheegay in ay riiqeen boqolaal ugxaan oo ay xeebta ku dhaleen nooc shimbiraha ka mid ah oo sii dabar...
Dawladda Australia ayaa sii adkaynaysa habka lagu helo dhalashadeeda iyada oo isabadal wayn ku samaynaysa sida ay ula macaamisho dadka soo galootiga ah. Dadka raba in ay...
Dawladda Australia ayaa sii adkaynaysa habka lagu helo dhalashadeeda iyada oo isabadal wayn ku samaynaysa sida ay ula macaamisho dadka soo galootiga ah. Dadka raba in ay qaataan dhalasho ayaa maridoona imtixaanno ay ka mid yihiin luuqadda Ingiriiska iyo awoodda ay u leeyihiin in ay ku dhaqmaan "qiyamka Australia" sida uu sheegay ra'iisalwasaare Malcolm Turnbull. Dadka soo...
Israa\_'iil oo nin Carab ah ku maamuustay abaalmarinta ugu sarraysa
Qofkii u horreeyay ee Carab ah ayaa lagu maamuusay abaalmarinta ugu sarraysa ee ay Israa'iil bixiso, isaga oo ku mutaystay in uu badbaadiyay Yuhuud intii uu socday xasuuqii Holocaust ee Nazi-ga. Maxamed Helmy oo dakhtar reer Masar ah ayaa qariyay haweenay Yuhuudad ah caawiyayna qoyskeeda oo Baarliin ku noolaa, halkaas oo uu ku noolaa kana shaqeeyay dagaakii labaad ee adduunka...
Maxkamadda Yurub oo xukun ka gaartay qaxootiga
Maxkamadda caddaaladda ee Yurub ayaa xukmisay in dadka magangalyo doonka ah dacwadahooda laga xareeyo dalka ugu horreeya ee ka tirsan midowga Yurub ee ay ka soo dhul billaabaan. Intii uu socday qulqulka muhaajiriinta ee 2015 iyo 2016 ayaa xuduudaha la isu furay, ayadoo dad badanna ay magangalyo ka dalbadeen dalal kale. Maxkamaddu waxay ogolaatay doodda dalalka Austria iyo...
Xafladii dadkan lagu gudoonsiiyey dhalashada waxaa goobjoog ahaa hay’adaha u doodo xuquuqda dadka soo galootiga ah, Xeerbeegti iyo Qaadiyo kasocdo gobolka Ohio, iyo waliba ehelada iyo saxiibada dadka dhalashada la gudoonsiinayey. ......
QM oo xayiraado cusub ku soo rogtay K/Waqooyi
Cod buuxa ayuu golaha amaanka ee Qaramada Midoobay ku meel mariyey in xayiraado adag la saaro Kuuriyada Waqooyi, taasoo jawaab u ah tijaabadii dhawaan ay ku samaysay gantaalaha ballistigga. Qaraarka qabyada ah ee Qaramada Midoobay waddo waxaa ka mid ah in hoos loo dhigo shidaalka uu dalku dibadda u dhoofiyo 90%. Shiinaha iyo Ruushka oo bahwadaag la ah Kuuriyada Waqooyi waxay u...